X-plore File Manager 4.15.00 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.15.00 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား X-plore File Manager
X-plore File Manager ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
● dual-pane ထဲကသစ်ပင်အမြင်
● Root, FTP, SMB1 / SMB2, SQLite, Zip, rar, 7zip, ကို DLNA / UPnP ရှာဖွေသူ
● Disk ကိုမြေပုံ - ဖိုင်တွေသင့်ရဲ့ disk ပေါ်မှာအများဆုံးအာကာသလောင်ရာတွေ့မြင် - http://bit.ly/xp-dmap
●မိုးတိမ်သိုလှောင်မှုလက်လှမ်း: Google Drive ကို™ Dropbox, Box ကို, အမေဇုန်သည်မိုဃ်းတိမ် drive ကို, ОБЛАКО.mail.ru, Mega.co, OneDrive, Flickr, Webdav, Yandex.disk, MediaFire ၏ပထမဆုံး, Owncloud, PCloud ထားသမျှကို SugarSync, GMX
● SSH ကို File Transfer (SFTP) နှင့် SSH ကိုရှဲလ် - http://bit.ly/xp-ssh ***
● App ကိုမန်နေဂျာ
●ကို USB OTG
(Android ပေါ်မှာ 5.0+) ● PDF ကိုကြည့်ရှုသူ
● Wi-Fi ဖိုင်ခွဲဝေမှု *** - http://bit.ly/xp-wifi
●တစ်ဦးကို PC ကို web browser ကနေဖိုင်များကိုစီမံ *** - http://bit.ly/xp-web
● Built-in ပုံများ, အသံ, စာသားများအတွက်ကြည့်ရှု
● hex ကြည့်ရှုသူ
လာမယ့် / ယခင်ပုံရိပ်တွေမှ zoom ကိုများနှင့်ဆလိုက်တွေနဲ့●အမြန် Image ကိုကြည့်ရှုသူ
ပုံရိပ်တွေနဲ့ဗီဒီယိုများအတွက်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောဖိုင်အမျိုးအစားများများအတွက်● Thumbnails (ဆက်စပ်လျှောက်လွှာပေါ် မူတည်. )
● Multi-ရွေးချယ်ရေး - အစဉ်အမြဲရရှိနိုင်သေးသောအနှောင့်ယှက်မပေး
ZIP ဖိုင်အဖြစ်●ကြည့်ရန် APK ကိုဖိုင်တွေ
●ဝေမျှမယ် - Bluetooth ကအီးမေးလ်ကဖိုင်တွေကိုပို့, ဒါမှမဟုတ် device ကိုထောက်ခံပါတယ်ဘာပဲဆိုတည်နေရာမှ
● Configuration ခလုတ်နှင့်အဓိက shortcuts တွေကို
အထိခိုက်မခံဖိုင်တွေကို encrypt ● Vault - http://bit.ly/xp-v ***
*** မှတ်သား features တွေပေးဆောင်ကြသည် - သူတို့လှူဒါန်းမှုလိုအပ်
X-plore ကိုသင်သင့်ရဲ့ Android device ကို၏အတွင်းပိုင်းကိုမြင်ရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ လည်းပြင်ပမှာ။
ဤသည် dual-pane ထဲကရှာဖွေသူဖြစ်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောဖိုင်တွေတယောက်ကိုတယောက် pane ထဲကထံမှပြုကူးယူအဖြစ်နှစ်ခုကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပြသဖိုလ်ဒါနှင့်ဘုံစစ်ဆင်ရေးရှိပါတယ်။
X-plore ကိုအခြားနေရာသို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်း switching များအတွက်အပင်တစ်ပင်ပါမြင်ကွင်းထဲမှာ folder ကိုအဆင့်ဆင့်ပြသထားတယ်။
စသည်တို့ကို, backup ဖိုင်တွေ, မလိုချင်တဲ့ applications များကိုဖယ်ရှား - သင် device ကိုနိုင်ငံတကာလေ့လာစူးစမ်းစေခြင်းငှါ, သင်တို့သည်တန်ခိုးကိုအသုံးပြုသူအနေနှင့်သင့် device ကိုအမြစ်တွယ်ခဲ့ကြပါလျှင်, သင် system ကိုဒေတာမှစသောအပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်
သငျသညျအငြိမ့်သင့်ရဲ့ device ပေါ်တွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမှတ်တရများ၏အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်ပူးတွဲ USB မှတ်ဉာဏ်ချောင်းကိုနိုင်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းတဲ့ app ကိုမန်နေဂျာတွေ့ run, မိတ္တူ, ရှယ်ယာ, ဖယ်ရှားရန်နှင့်ထပ်မံထည့်သွင်း applications များစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပြုပါတယ်။
Wi-Fi ကိုကျော်အခြား Android devices များအနေဖြင့်သင့်ရဲ့ Android device ကိုအပေါ် Access ကိုဖိုင်များကို။
တစ်ဦးကို PC ကို web browser ကနေ Access ကို
သင့်ရဲ့ Android device ကိုအပေါ်ဖိုင်များကိုသင့်ရဲ့ PC မှာထံမှများကိုစီမံကွပ်ကဲ။
FTP နှင့် FTPS (လုံခြုံ FTP) ဆာဗာ Access ကိုထောက်ခံနေပါတယ်။
အကွိမျမြားစှာသောဆာဗာ configured နိုင်ပါသည်။
X-plore LAN အခြားကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်မျှဝေဖိုလ်ဒါဖော်ပြရန်နိုင်ပါတယ်။
X-plore အမျိုးမျိုးသောက်ဘ်ဆိုက်သိုလှောင်မှု "တိမ်တိုက်" ဆာဗာများရယူ, သူတို့၏ files တွေကို access နိုင်ပါတယ်။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်က X-plore မှတဆင့်အွန်လိုင်းသိမ်းဆည်းထားသင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုရယူနိုငျသညျ, ထောက်ခံကို web service ကိုအတွက်အကောင့်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ထောကျပံ့လည်း SSH ကို File Transfer (SFTP) နှင့် Terminal နှင့် shell ကို emulator ဖြစ်ပါတယ်။
X-plore မဆိုရရှိနိုင်တည်နေရာမှသီချင်းများ play နိုငျသောဂီတကစားသမားပါရှိသည်။
Vault function ကိုနှင့်အတူသငျသညျကိုတောင်သင့်ရဲ့လက်ဗွေရာအသုံးပြုပုံထိခိုက်မခံတဲ့ဖိုင်တွေကိုစာဝှက်ပေးနိုင်သည်။
ကြည့်ရှု, ကူးယူ, ရွေ့လျား, မဖျက်ပစ်, Zip မှချုံ့, extracting, အမည်ပြောင်း, ခွဲဝေမှုနှင့်ထို့ထက် ပို. - main စစ်ဆင်ရေးဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေကြသည်။
SQLite database ကိုကြည့်ရှုသူ
X-plore စားပွဲ၏တိုးချဲ့စာရင်း, ဒေတာဘေ့စ entries တွေကိုနှင့်အတူတန်းစီခြင်းနှင့်ကော်လံ၏စာရင်းများအသီးအသီးကိုစားပွဲအဖြစ် SQLite database ကိုဖိုင်တွေ (.db extenstion နဲ့ရှိသူများ) ကိုပြသနိုင်ပါတယ်။
ပင်မအပြန်အလှန်ဖိုင်တွေဖွင့်ဖို့ဖိုလ်ဒါသို့မဟုတ်ဖိုင်များကိုကလစ်နှိပ်ခြင်း, ထိတွေ့မျက်နှာပြင်အားဖြင့်ပြုသောအမှု, သို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်နှိပ်ထားခြင်းကို item, ဒါမှမဟုတ်မျိုးစုံရွေးချယ်ထားသည့်ပစ္စည်းများအပေါ်ပြုမိနိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုများပါရှိသည်ရသော Context Menu ကဖွင့်လှစ်ဖို့ရှည်လျား-click ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံများ, အသံ, ဗီဒီယိုနှင့်စာသား: file ကိုဖွင့်လှစ် built-in ကြည့်ရှုသူအများဆုံးလူကြိုက်များဖိုင်အမျိုးအစားများများအတွက်များထဲမှသုံးစွဲဖို့ကိုဆိုလိုတာဖြစ်နိုင်သည်။
သို့မဟုတ်သင်အထူးသဖြင့် file ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်သောအမှုစနစ်က-ကြိုတင်သတ်မှတ်ထား application ကိုစတင်သောဖိုင်များ, ဖွင့်လှစ်ဘို့စနစ်အပလီကေးရှင်းကိုသုံးပါ X-plore ကို configure လိမ့်မည်။
မော်ကွန်း (လက်ရှိထောက်ခံကြသည်ဇစ်, rar နဲ့ 7zip) အခြားဖိုလ်ဒါအဖြစ်ပြသထားပါသည်။
X-plore File Manager အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
X-plore File Manager အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
X-plore File Manager အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
X-plore File Manager အား အခ်က္ျပပါ
hazel777 စတိုး 73.64k 44.5M
X-plore File Manager ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း X-plore File Manager အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.15.00
ထုတ်လုပ်သူ Lonely Cat Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.lonelycatgames.com/wiki/xplore/privacy
Release date: 2019-07-14 09:48:57
လက်မှတ် SHA1: EC:77:6C:6B:6B:E9:50:7C:22:6F:09:27:0F:43:EE:D8:A5:F0:30:8D
ထုတ်လုပ်သူ (CN): LCG Admin
အဖွဲ့အစည်း (O): Lonely Cat Games
နိုင်ငံ (C): SK
X-plore File Manager APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ